Global (Mareykanka, Midowga Yurub iyo Shiinaha) Warbixinta Cilmi-baarista Suuqa Intercom ee Qarax-Cadaynta 201-Warshadaha Warka-Yuyao Xianglong Isgaarsiinta Warshadaha Co., Ltd.
Global (Mareykanka, Midowga Yurub iyo Shiinaha) Warbixinta Cilmi-baarista Suuqa Intercom ee Qarax-Cadayn ah 201
Waqtiga: 2019-08-03 Hits: 17
Intercom waa nooc ka mid ah qalabka isgaarsiinta moobiilka ee labada dhinac ah, kaas oo loo isticmaali karo isgaarsiinta iyada oo aan wax taageero ah laga helin shabakadda.
Aasiya-Baasifigga waa suuqa ugu weyn uguna dhaqsaha badan ee soo kordha ee biyo-mareenka 'Intercom' inta lagu jiro muddada saadaasha.
Sanadka 2019, cabirka suuqa ee Qarax-Cadaynta Intercom waa xx milyan US $ oo wuxuu gaari doonaa xx milyan US $ 2025, wuxuu ku korayaa CAGR ah xx% laga bilaabo 2019; halka Shiinaha, cabirka suuqa lagu qiimeeyo xx milyan US $ wuxuuna u kici doonaa xx milyan US $ 2025, iyadoo CAGR ah xx% inta lagu jiro xilliga saadaasha.
Warbixintan, 2018 waxaa loo tixgeliyey inuu yahay sanad aasaasi ah iyo 2019 illaa 2025 oo ah xilliga saadaasha si loo qiyaaso cabbirka suuqa ee Intercom Qarax-Caddaynta.
Warbixintani waxay darsaysaa baaxadda suuqa adduunka ee Qarax-Cadaynta Intercom, gaar ahaan waxay diiradda saaraysaa gobollada muhiimka ah sida Mareykanka, Midowga Yurub, Shiinaha, iyo gobollada kale (Japan, Korea, India iyo Koonfur-bari Aasiya).
Daraasadani waxay soo bandhigeysaa wax soo saarka Intercom ee Qarax-Cadaynta, dakhliga, saamiga suuqa iyo heerka kobaca ee shirkad kasta oo muhiim ah, waxayna sidoo kale daboolaysaa xogta burburka (soosaarka, isticmaalka, dakhliga iyo saamiga suuqa) ee gobolada, nooca iyo codsiyada. xogta burburka taariikhda 2014 ilaa 2019, iyo saadaasha sanadka 2025.
Shirkadaha ugu sareeya Mareykanka, Midowga Yurub iyo Shiinaha, warbixintani waxay baarayaan oo ay falanqeeyaan wax soo saarka, qiimaha, qiimaha, saamiga suuqa iyo heerka kobaca ee soosaarayaasha ugu sareeya, xogta muhiimka ah laga bilaabo 2014 illaa 2019.
Suuqa adduunka, shirkadaha soo socda ayaa daboolaya:
Ningbo Joiwo Qarxa Tiknoolojiyadda
Isgaarsiinta Yuyao Xianglong
Qaybta Suuqa ee Nooca Badeecada
Isku-xidhka gidaarka-derbiga ah
Qaybta Suuqa ee Codsiga
Samatabbixin Degdeg ah
Gobollada Muhiimka ah ayaa ku kala qaybsamay warbixintan: xogta burburka gobol kasta.
Dunida inteeda kale (Japan, Korea, India iyo Koonfur-bari Aasiya)
Ujeeddooyinka daraasaddu waa:
Si loo falanqeeyo loona baaro xaaladda Intercom ee Qarax-Cadaynta iyo saadaasha mustaqbalka ee Mareykanka, Midowga Yurub iyo Shiinaha, oo ku lug leh iibka, qiimaha (dakhliga), heerka kobaca (CAGR), saamiga suuqa, taariikheed iyo saadaasha
Si loo soo bandhigo furayaasha soosaarayaasha Qarax-Cadaynta Intercom, soo bandhigida iibka, dakhliga, saamiga suuqa, iyo horumarkii ugu dambeeyay ee loogu talagalay ciyaartoy muhiim ah.
Si loo kala qaado xogta burburka gobollada, nooca, shirkadaha iyo barnaamijyada
Si loo falanqeeyo fursadaha iyo faa'iidooyinka suuqyada caalamka iyo furaha u ah, fursadda iyo loolanka, xakamaynta iyo qatarta.
Si loo aqoonsado isbeddellada muhiimka ah, darawallada, saameynta saameynta adduunka iyo gobollada
Si loo falanqeeyo horumarka tartanka sida balaadhinta, heshiisyada, soosaarka alaabada cusub, iyo wax soo iibsiga suuqa
Hore: Suuqa Nidaamka Gelitaanka ee Furaha ah si uu Saameyn Weyn ugu yeesho Mustaqbalka Dhow sanadka 2025
Xiga: Telefoon Lacag Bixin ah